သင့်ဝင်ငွေလစာကို အဖက်တင်အောင် စုဆောင်းနည်း (၅) မျိုး - HARTHANANTAW
Knowledge October 7, 2019
ပိုက်ဆံ ဆိုတာက ရှာရတာ ခက်သလောက် သုံးရတာက လွယ်ပါတယ်။ ၀င်ငွေနဲ့ ထွက်ငွေ မကိုက်တဲ့အခါ ဘဏ်စာရင်းမှာ အနှုတ်ပြနေ တာတွေလည်း ရှိလာတတ်တယ်။ တစ်နေ့လုပ် တစ်နေ့စားတွေ၊ လခစားဝန်ထမ်းတွေ အတွက် ၀င်ငွေနဲ့ ထွက်ငွေ ကိုက်ပြီး ပိုက်ဆံ ပိုစုမိအောင် စနစ်တကျ ပိုက်ဆံစုနည်းလေးကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ် နော် ….
(1) ကုန်ကျစရိတ်တွေကို စာအုပ်နဲ့ရေးမှတ်ထားပါ
ပိုက်ဆံ စုတော့မယ်လို့ စဉ်းစားလိုက်တာနဲ့ ပထမဆုံး အရင် လုပ်ရမှာကတော့ စာရင်းလုပ်တာ ပါပဲ။ ထွက်ငွေစာရင်းကို အတိအကျ ချရေးပေးပါ။ တစ်နေ့ကို ဘယ်လောက်သုံးမိလဲ ဆိုတာကို သေးသေးလေးအတွက် ကုန်တာက အစ စာအုပ် တစ်အုပ်ထဲမှာ ချမှတ် ထားပါ။ ရက်စွဲနဲ့ အတူ ဒီနေ့ အသုံးစရိတ်တွေကို ချမှတ်ပေးထားပါ။ ဘယ်လိုအချိန်မှာ ချမှတ်သင့်သလဲဆိုရင် ညဘက် အိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အချိန်မှာ တစ်နေ့တာရဲ့ ကုန်ကျစရိတ်တွေကို ချမှတ်တာ ကောင်းပါတယ် …။
(2) တစ်နေ့ကို ဘယ်လောက်ပဲသုံးမယ်ဆိုပြီး ရည်မှန်းထားပါ
ကိုယ်ရဲ့ဝင်ငွေနဲ့အတူ တစ်လကို ဘယ်လောက်ပဲသုံးမယ်ဆိုပြီး သတ်မှတ်ထားပါ။ တစ်လကို (ဒါမှမဟုတ်) တစ်နေ့ကို ဒီလောက်ပဲသုံးမယ်လို့ သတ်မှတ်ထားရင် ဒီလောက်ပဲသုံးပေးပါ။ အဲ့လိုသတ်မှတ်ထားတဲ့ ငွေပမာဏအတိုင်းသုံးနိုင်မှ အပိုအတွက် ငွေကို မသုံးတော့မှာပါ။ ပုံမှန်ကို ဒီလိုပဲ လုပ်သွားပေးရင် စုငွေ တိုးလာ မှာဖြစ်ပါတယ် …။
(3) ပိုက်ဆံစုဖို့အတွက် အစီအစဉ်ဆွဲပါ
ပိုက်ဆံစုမယ်လို့ တွေးမိလိုက်တာနဲ့ ပိုက်ဆံစုဖို့အတွက် အစီအစဉ်ဆွဲလိုက်ပါ။ ကိုယ့်လစာရဲ့ ၁၅ရာခိုင်နှုန်းကို စုနိုင်အောင်ကြိုးစားကြည့်ပါ။ အသုံးစရိတ်တွေအရမ်းများနေရင်တော့ (၁၅)ရာခိုင်နှုန်းကိုစုမိမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒါကြောင့် ကုန်ကျစရိတ်စာရင်းကို အရင်လုပ်ထားပါ။ ကုန်ကျစရိတ်တွေကိုသိရမှ ဘာတွေကို အပိုသုံးမိနေလဲဆိုပြီး သိသွားမှာပါ။ အပိုကုန်နေတာတွေရှိနေခဲ့ရင် လျော့သုံးနိုင်မှာပါ။ ဒါမှလည်း လစာရဲ့ (၁၅)ရာခိုင်နှုန်းကို စုမိလာမှာပဲဖြစ်တယ် …။
(၄) ဘာအတွက် ပိုက်ဆံစုချင်တာလဲ ဆိုတာကို ချရေးထားပါ
ပိုက်ဆံစုတယ်ဆိုတာ ရည်ရွယ်ချက်ပန်းတိုင်တစ်ခုလိုပါပဲ။ အဲဒီပန်းတိုင်ကို ရောက်ဖို့အတွက် ပိုက်ဆံစုနေရတာပါ။ ပိုက်ဆံစုရတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကို သိအောင်ချရေးထားပါ။ ဘာအတွက် ပိုက်ဆံစုနေတာလဲဆိုတာကို ချရေးထားပါ။ အိမ်ဝယ်ချင်လို့ပဲဖြစ်စေ၊ ခရီးထွက်ချင်လို့ပဲဖြစ်စေ ကိုယ့်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေကို ချရေးထားပါ။ ဒီရည်ရွယ်ချက်ပန်းတိုင်ကြီး ဖြစ်မြောက်လာဖို့အတွက် အချိန်ဘယ်လောက်ထိစုလိုက်ရတယ်ဆိုတာပါ သိလာရမှာပါ။ အဲဒါကြောင့် အိမ်ပြန်ပြင်ဖို့ဆိုရင် ပိုက်ဆံကို ဘယ်နှနှစ်ထိစုမယ်ဆိုပြီး ရည်ရွယ်ချက်ထားပြီး စုပေးပါ …။
(၅) လိုအပ်တာကိုပဲ အရင်ဝယ်ပါ
ကုန်ကျစရိတ်တွေ ချရေးထားပြီးရင်တော့ အပိုသုံးမိနေတာတွေကို လျော့ချတဲ့အနေနဲ့ လိုတာကိုပဲဝယ်ပါ။ တစ်လစာ ၀ယ်ရမယ့်စာရင်းလုပ်ထားပါ။ အဲ့ထဲမှာမှ ကိုယ့်အတွက်ရော၊ အိမ်အတွက်ရော အရင်လိုနေတာကို အရင်ဝယ်ပါ။ အပိုမကုန်ရအောင် စာရင်းကို သေချာလုပ်ပြီးမှ ကိုယ်အတွက် တကယ်လိုနေတဲ့ပစ္စည်းကိုပဲ အရင်ဝယ်သင့်ပါတယ် …။ ။
CRD – Hannwe Soe (Shwemom)
သငျ့ဝငျငှလေစာကို အဖကျတငျအောငျ စုဆောငျးနညျး (၅) မြိုး
ပိုကျဆံ ဆိုတာက ရှာရတာ ခကျသလောကျ သုံးရတာက လှယျပါတယျ။ ဝငျငှနေဲ့ ထှကျငှေ မကိုကျတဲ့အခါ ဘဏျစာရငျးမှာ အနှုတျပွနေ တာတှလေညျး ရှိလာတတျတယျ။ တဈနလေု့ပျ တဈနစေ့ားတှေ၊ လခစားဝနျထမျးတှေ အတှကျ ဝငျငှနေဲ့ ထှကျငှေ ကိုကျပွီး ပိုကျဆံ ပိုစုမိအောငျ စနဈတကြ ပိုကျဆံစုနညျးလေးကို မြှဝပေေးလိုကျပါတယျ နျော ….
(1) ကုနျကစြရိတျတှကေို စာအုပျနဲ့ရေးမှတျထားပါ
ပိုကျဆံ စုတော့မယျလို့ စဉျးစားလိုကျတာနဲ့ ပထမဆုံး အရငျ လုပျရမှာကတော့ စာရငျးလုပျတာ ပါပဲ။ ထှကျငှစောရငျးကို အတိအကြ ခရြေးပေးပါ။ တဈနကေို့ ဘယျလောကျသုံးမိလဲ ဆိုတာကို သေးသေးလေးအတှကျ ကုနျတာက အစ စာအုပျ တဈအုပျထဲမှာ ခမြှတျ ထားပါ။ ရကျစှဲနဲ့ အတူ ဒီနေ့ အသုံးစရိတျတှကေို ခမြှတျပေးထားပါ။ ဘယျလိုအခြိနျမှာ ခမြှတျသငျ့သလဲဆိုရငျ ညဘကျ အိမျပွနျရောကျတဲ့အခြိနျမှာ တဈနတေ့ာရဲ့ ကုနျကစြရိတျတှကေို ခမြှတျတာ ကောငျးပါတယျ …။
(2) တဈနကေို့ ဘယျလောကျပဲသုံးမယျဆိုပွီး ရညျမှနျးထားပါ
ကိုယျရဲ့ဝငျငှနေဲ့အတူ တဈလကို ဘယျလောကျပဲသုံးမယျဆိုပွီး သတျမှတျထားပါ။ တဈလကို (ဒါမှမဟုတျ) တဈနကေို့ ဒီလောကျပဲသုံးမယျလို့ သတျမှတျထားရငျ ဒီလောကျပဲသုံးပေးပါ။ အဲ့လိုသတျမှတျထားတဲ့ ငှပေမာဏအတိုငျးသုံးနိုငျမှ အပိုအတှကျ ငှကေို မသုံးတော့မှာပါ။ ပုံမှနျကို ဒီလိုပဲ လုပျသှားပေးရငျ စုငှေ တိုးလာ မှာဖွဈပါတယျ …။
(3) ပိုကျဆံစုဖို့အတှကျ အစီအစဉျဆှဲပါ
ပိုကျဆံစုမယျလို့ တှေးမိလိုကျတာနဲ့ ပိုကျဆံစုဖို့အတှကျ အစီအစဉျဆှဲလိုကျပါ။ ကိုယျ့လစာရဲ့ ၁၅ရာခိုငျနှုနျးကို စုနိုငျအောငျကွိုးစားကွညျ့ပါ။ အသုံးစရိတျတှအေရမျးမြားနရေငျတော့ (၁၅)ရာခိုငျနှုနျးကိုစုမိမှာ မဟုတျပါဘူး။ အဲဒါကွောငျ့ ကုနျကစြရိတျစာရငျးကို အရငျလုပျထားပါ။ ကုနျကစြရိတျတှကေိုသိရမှ ဘာတှကေို အပိုသုံးမိနလေဲဆိုပွီး သိသှားမှာပါ။ အပိုကုနျနတောတှရှေိနခေဲ့ရငျ လြော့သုံးနိုငျမှာပါ။ ဒါမှလညျး လစာရဲ့ (၁၅)ရာခိုငျနှုနျးကို စုမိလာမှာပဲဖွဈတယျ …။
(၄) ဘာအတှကျ ပိုကျဆံစုခငျြတာလဲ ဆိုတာကို ခရြေးထားပါ
ပိုကျဆံစုတယျဆိုတာ ရညျရှယျခကျြပနျးတိုငျတဈခုလိုပါပဲ။ အဲဒီပနျးတိုငျကို ရောကျဖို့အတှကျ ပိုကျဆံစုနရေတာပါ။ ပိုကျဆံစုရတဲ့ ရညျရှယျခကျြကို သိအောငျခရြေးထားပါ။ ဘာအတှကျ ပိုကျဆံစုနတောလဲဆိုတာကို ခရြေးထားပါ။ အိမျဝယျခငျြလို့ပဲဖွဈစေ၊ ခရီးထှကျခငျြလို့ပဲဖွဈစေ ကိုယျ့ရဲ့ရညျရှယျခကျြတှကေို ခရြေးထားပါ။ ဒီရညျရှယျခကျြပနျးတိုငျကွီး ဖွဈမွောကျလာဖို့အတှကျ အခြိနျဘယျလောကျထိစုလိုကျရတယျဆိုတာပါ သိလာရမှာပါ။ အဲဒါကွောငျ့ အိမျပွနျပွငျဖို့ဆိုရငျ ပိုကျဆံကို ဘယျနှနှဈထိစုမယျဆိုပွီး ရညျရှယျခကျြထားပွီး စုပေးပါ …။
(၅) လိုအပျတာကိုပဲ အရငျဝယျပါ
ကုနျကစြရိတျတှေ ခရြေးထားပွီးရငျတော့ အပိုသုံးမိနတောတှကေို လြော့ခတြဲ့အနနေဲ့ လိုတာကိုပဲဝယျပါ။ တဈလစာ ဝယျရမယျ့စာရငျးလုပျထားပါ။ အဲ့ထဲမှာမှ ကိုယျ့အတှကျရော၊ အိမျအတှကျရော အရငျလိုနတောကို အရငျဝယျပါ။ အပိုမကုနျရအောငျ စာရငျးကို သခြောလုပျပွီးမှ ကိုယျအတှကျ တကယျလိုနတေဲ့ပစ်စညျးကိုပဲ အရငျဝယျသငျ့ပါတယျ …။ ။